Malunga nathi-Beijing Duomilai Iingubo kunye neengubo zengubo,
UKUZIVA iimpahla zokupheka ezingahambelani nomgangatho ngumenzi wemveliso owenza iiyunifom eyodwa kubasebenzi bamashishini okutya.
I-CHECKEDOUT yasungulwa ngo-1995 kwaye ikomkhulu lalapho eBeijing, China.
Iimveliso zithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-50 kuquka nezingaphezulu kwe-80 iivenkile ezizodwa kunye namaqela okuthengisa ayi-100. Umthamo wentengiso ngu-NO.1 eTshayina, ngokuthengisa konyaka iziqwenga ezingaphezu kwama-7 ezigidi. Iivenkile ezingaphezulu kwe-100 zasekhaya kunye nabasasazi abangama-200.
UKUQHUTYELWA sisiseko semveliso ezi-3 eziseYanjiao, Qingxian naseYuncheng. Malunga ne-500 yabasebenzi eqinisekisa ukuba siyakwazi ukufezekisa iimfuno zabathengi abahlukeneyo.
UKUHLAZA iimveliso kuluhlu olubandakanya ukudibanisa ingubo yechef, iipleyiti zechef, ibhulukhwe yokucheba, iminqwazi, ingxowa yommese njl.
UKUQHELEKELWA yiNgqungquthela ye-Chef Uniform yeNgqungquthela yeGourmet yeHlabathi; I-White House yase-US yonyule umlingane kumlinganisi; Ukhuphiswano lweCCTV-2 Chef King lonyulelwe umthengisi okhethiweyo njl.
Ukusebenzisana ne-YKK, TORAY kunye nezinye iinkampani ze-Fortune 500 ukwenza uthotho lweemveliso ezingahambelani neempawu, ezingancinisiyo, ikotoni esemgangathweni yeprimiyamu, simahla i-carcinogen, kunye nobomi benkonzo ende. Iyanciphisa inani elikhulu lokukhutshelwa kwekhabhoni kuluntu kwaye yenza igalelo elikhulu kukhuseleko lokutya nakwimpilo yoluntu minyaka le.
Iqela le-R&D elinobuchule elinama-20persons abamba olona lwazi lusemgangathweni kwimfashini kwaye aphuhlise iimveliso ezinokubaluleka kunye nobuhle.
IQELA CHELEKILEYO lixhasa ubugcisa obunikezelweyo, ubuchwephesha kunye nobuchule bobugcisa kunye nezifungo ukwenza ICHEKHISI yokugqoka engahambelani neshishini lokuloba ibe yindawo eyaziwayo yehlabathi.